ACT စျေး - အွန်လိုင်း ACT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ACT (ACT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ACT (ACT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ACT ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $6 897 359.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ACT တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ACT များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ACTACT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0085ACTACT သို့ ယူရိုEUR€0.00725ACTACT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00652ACTACT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00781ACTACT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0768ACTACT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.054ACTACT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.19ACTACT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.032ACTACT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0113ACTACT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0119ACTACT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.191ACTACT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0659ACTACT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0457ACTACT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.635ACTACT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.44ACTACT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0117ACTACT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.013ACTACT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.265ACTACT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0591ACTACT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.907ACTACT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩10.08ACTACT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.3ACTACT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.623ACTACT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.236
ACTACT သို့ BitcoinBTC0.0000008 ACTACT သို့ EthereumETH0.00002 ACTACT သို့ LitecoinLTC0.000159 ACTACT သို့ DigitalCashDASH0.0001 ACTACT သို့ MoneroXMR0.0001 ACTACT သို့ NxtNXT0.689 ACTACT သို့ Ethereum ClassicETC0.00127 ACTACT သို့ DogecoinDOGE2.54 ACTACT သို့ ZCashZEC0.000109 ACTACT သို့ BitsharesBTS0.331 ACTACT သို့ DigiByteDGB0.284 ACTACT သို့ RippleXRP0.0305 ACTACT သို့ BitcoinDarkBTCD0.000299 ACTACT သို့ PeerCoinPPC0.0286 ACTACT သို့ CraigsCoinCRAIG3.95 ACTACT သို့ BitstakeXBS0.37 ACTACT သို့ PayCoinXPY0.151 ACTACT သို့ ProsperCoinPRC1.09 ACTACT သို့ YbCoinYBC0.000005 ACTACT သို့ DarkKushDANK2.78 ACTACT သို့ GiveCoinGIVE18.78 ACTACT သို့ KoboCoinKOBO1.98 ACTACT သို့ DarkTokenDT0.00783 ACTACT သို့ CETUS CoinCETI25.03